tranoFandraisana orinasaMomba anay tolotraFihariana mahakasikaVaovao faqFanontaniana fifandraisanaHifandray aminay
tranoFandraisana orinasaMomba anay tolotraFihariana
mahakasikaVaovao faqFanontaniana fifandraisanaHifandray aminay
hanangana ny ampitso
Fihary dia tranokalam-pampiasam-bola azo antoka eny anivon'ny Cryptomoney. Ny vola no hiasa ho anao
Volana Tany Masoandro
550% afaka 245 andro
1200% afaka 365 andro
3000% afaka 547 andro
Fiarovana azo antoka
Manatsara ireo tolotra hatrany
Fihary Limited dia voaary mba hamaly ireo mpampiasa vola mivantana manoloana ny fahasarotan’ny tsenam-barotry ny Cryptomoney. Misorata anarana ato aminay amin’ny alalan’ny solosaina na finday, misafidiana tolotra fihariana izay mety aminao, ary mahazoa tombony azo antoka.
Ny tolotra dia efa voarindra tanteraka mba hivarotra sy hividy ireo vola miasa ary hamaritana ireo tombony azo avy amin’izany.
Mampiasa Bot voarindra tanteraka sy azo antoka ny Fihary. Raha handray anjara ianao, dia midira fotsiny ato amin’ny Fihary, manaova petra-bola, miandrasa ireo andro hiakaran’ny petra-bola ary raiso ireo tombony ho anao amin’ny faran’ny fifanarahina.
Ny fampidirina ny « encryption » manokana dia nahafahanay namorona vokatra nomerika tokana sy azo antoka Ny angona rehetra momban’ny kaonty, ny fifanakaloazana dia voaaro sy tsy azo hidirana afa-tsy amin’ilay mpampiasa azy irery ihany. .
Izahay dia tsy miara-miasa afa-tsy amin'ny fifanakalozana tsena cryptocurrency irery ihany.
Ny Fihary Limited dia noforonina ho an'ny tsenan'ny « cryptocurrency » miovaova. Ny bot dia manatsara tsy tapaka ny algorithm miasa amin'ny alàlan'ny fampidirana fitaovana fanampiny ho an'ny fanadihadiana marina kokoa eo amin’ny tsenan'ny fifanakalozana.
Tanora ratsy fihary, ka antitra vao ratsy laoka
Adiresy Canto Court, 122 Old Street, London, England, EC1V 9BD
Azonao atao ny mampiasa
Mahakasika ny fifanekena